Dowlada Sacuudiga ayaa sheegtay in diyaarado Drones ah lagu weeraray dhuumaha saliida… – Hagaag.com
Dowlada Sacuudiga ayaa sheegtay in diyaarado Drones ah lagu weeraray dhuumaha saliida…
Posted on 14 Maajo 2019 by Admin in World // 0 Comments
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in dayuurado Drones ah (nooca aan duuliyaha lahayn) oo sida walxaha qarxa ay maanta weerar ku qaadeen dhuumaha saliidda ee Bariga iyo galbeedka oo u qaada dekeda Yunbuc oo ah xeebaha galbeed.
Wasiirka Tamarta Sacuudiga ayaa sheegay in weerarkan oo lagu qaaday laba goobood oo saliidda laga soo saaro uusan gaysan waxyeelo badan balse uu hakad geliyey saliid soo saaristii.
Khalid Al-Falih ayaa war ay baahisay warbaahinta dowladda ku sheegay in weeraradan ay halis ku yihiin qeybinta saliida caalamka, isla markaana loo baahan yahay in laga hortago aragagixisada ka dambeysay ficilladan” oo ay ku jiraan kooxah Xuutiyiinta dalka Yemen ee Iran ay taageerto.
Talefishinta Xuutiyiinta ee Masirah ayaa sarkaal milatari ka soo xigtay in Xuutiyiinta ay weerar ku qaadeen goobo muhiim ah oo ku yaalla Sacuudiga.
Weerarka maanta ayaa yimid maalin kadib markii Sacuudi Carabiya ay sheegtay in laba ka mid ah maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeello xooggan kasoo gaartay weerar arbushaad ah oo axaddii loogu gaystay xeebta Imaaraadka Carabta.